Android 1.6 သို့မဟုတ် Official Donut ကို root မပါဘဲ Htc G1 တွင်တပ်ဆင်ပါ Androidsis
antocara | | Android Root, HTC က, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
T-Mobile ၎င်း၏ OTA မှတဆင့်စတင်ရန်စတင်ခဲ့သည် Android 1.6 သို့မဟုတ် Donut အသစ်ပြောင်းခြင်း သူတို့ရဲ့ဆိပ်ကမ်းရန် HTC G1 ယူအက်စ်တွင် သင့်တွင်အမြစ်တွယ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်မူလဗားရှင်းနှင့်ဤကုမ္ပဏီမှ terminal တစ်ခုရှိပါက မယားOTA မှတစ်ဆင့် update ကိုစောင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ -
ပြီးခဲ့သည့်ဖိုင်ကို SD ကဒ်၏မူလနေရာတွင်ကူးယူပြီး update.zip ဟုအမည်ပြောင်းပါ။
HOME + ပါဝါကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖုန်းကို recovery mode တွင်ပြန်လည်စတင်ပါ။
တြိဂံတစ်ခုအတွင်း၌ exclamation point ပေါ်လာသည်ကိုမြင်သောအခါ Alt + L ခလုတ်ကိုတစ်ချိန်တည်း နှိပ်၍ ရွေးစရာများပါသောဖန်သားပြင်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
Alt + S ကိုနှိပ်ပြီး terminal update ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့် Menu - Settings - ဖုန်းအကြောင်းနှင့်ရွေးချယ်စရာများအားလုံး၏အဆုံးတွင် DRC83 ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Donut update ကို။
ဒီနည်းလမ်းကိုယူနိုက်တက်စတိတ်၏ T-Mobile G1 ကိုမွမ်းမံရန်အသုံးပြုတယ်ဆိုတာသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Android 1.6 ကို HTC G1 တွင်အမြစ်မပါဘဲတရားဝင်ရုံးခန်းဖွင့်ပါ
မနေ့ကပဲငါ OTA ကနေတဆင့် update လုပ်တယ်, သော့ဖွင့်ပြီး United States xD မရှိပေမယ့်
ငါအသစ် vodafone စပိန်မှော်အပေါ် update ကိုအသစ် install လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းအားလုံးလိုက်နာပါပြီ။
ငါ recovery mode သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အားလုံးမှန်ကန်သည်။
E: cache / recovery / command ကိုဖွင့်လို့မရဘူး
ငါ Alt + SY ABALAL INSTALALAL ကိုပေးသည်။
ငါ Alt + S ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါ G1 ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ keyboard ကိုဆိုလိုတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Magic of Rom ရဲ့ထက်ဝက်ရှိတဲ့ G1 အတွက်အဲဒါကိုလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲဒါကိုသင့်ရဲ့မှော်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ကျွန်တော်မအကြံပြုဘူး။
START + HOME ကိုထပ်မံနှိပ်ရုံသာဖြစ်ပြီး၊ ကွင်းဆက်များတွင်အတိုကောက်နှင့်အတူ command များပေါ်လာမည်။ (ဥပမာ - update + alt ကို install လုပ်ရန်)
ah အလွန်ကောင်းတဲ့ကားလို့စ် !!! မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာတွေ့ပြီ၊ ငါမသိဘူး။ တွေ့ရှိချက်ကိုမျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ G1 Donut တွင်ပိုင်ရှင်များသည်စျေးကွက်ထဲမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည်။
T-Mobile UK (United Kingdom) သည်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် Donut အား၎င်း၏ G1 နှင့် G2 သို့စတင်ဖြန့်ချိမည်ကိုလည်းဖတ်ရှုပါ။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှော်အဘို့အကျန်ရှိနေသည်နည်းနည်း, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါဒါမျှော်လင့်ပါတယ်။
vdd သည်ကျွန်ုပ်အလွန်အပူတပြင်းကျွန်ုပ်တင်သည့်အရာကိုတပ်ဆင်လိုက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့သာလာသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဂီတအတွက်၊ အမှားအတွက်၊ အမှားအတွက်အမှားအယွင်းများမှားယွင်းစွာစတင်လာသည်။ ၎င်းကိုစက်ရုံမှပြန်လည်စတင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ် gmail အကောင့်မှ ၀ င်လိုသည်။ ၎င်းသည်ချစ်ပ်သည်ဒေတာသို့မဟုတ်ယာယီပြsupportနာကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားမပြောနိုင်ပါ။ ငါ့ကိုဖုန်းထဲထည့်ခွင့်မပြုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှာ ...
ကျွန်ုပ်သည် OTA ဗားရှင်းရရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းမထားပါ။ အကယ်၍ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသွားပါက download ဆွဲခြင်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းပြပြီး၎င်းကို ထပ်မံ၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် option နှင့်အတူ ၀ သို့ပြန်သွားသည်။ ဒါဘာကြောင့်လဲ
ငါဒီနေရာမှာအဆင့်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင့်စစ်ဆင်ရေးဖျက်သိမ်း။ ဒါဟာငါ့ကိုလက်မှတ် (302 ဖိုင်တွေ) ကိုမထားဘူးအောက်မှာငါအတည်ပြုရန်ပျက်ကွက်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကားလို့စ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် HTC T-Mobile G1 ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် recovery mode တွင်ပိတ်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား / ဖွင့် / cache / recovery / command အမှားဖြစ်စေသည်။ ငါ့ကိုအမှားတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ Ab2 မှာ line1.0 …ဘာလုပ်ရမလဲ ??? ငါ SD ထဲသို့ application များထည့်သွင်းရန်အခြားပို့စ်တစ်ခု၏အဆင့်များအတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီး version ကို 1.6 သို့လျှော့ချလိုက်သည်။ သို့သော် telnet သည်ငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်တော့။ ယခုတွင်ငါအရင်ရှိသော version XNUMX သို့ပြန်သွားချင်သည်။ သင်၏အရေးပေါ်အကူအညီကို ကျေးဇူးပြု၍ ယူပါ။
ကျွန်ုပ်သည် Android 1.0 ဖြင့် HTC Dream ကိုသော့ဖွင့်ထားသည်။ ၁.၆ သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။ သင်ဤဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ဖုန်းမဟုတ်ပါ။
ငါ့မှာ g1 ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် donut update ကမရောက်လာဘူး။ ငါဘယ်လိုရောက်လာမလဲ၊ တစ်လကျော်စောင့်နေတယ်
လေးစားပါတယ် ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်။ ငါ G1 ကို update လုပ်ဖို့ပြောတဲ့အဆင့်တွေကိုငါ 1.0 ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် cupcake ကိုပြန်သွားချင်တယ်။ 1.5 ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် SD က update ကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ငါ့ကိုပြောတယ်။ ငါဘာအမှားလုပ်နေတာလဲ ကူညီကြပါ
Tavo VR ဟုသူကပြောသည်
ဤဖိုင်ရှိသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှ ကျေးဇူးပြု၍ တင်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 1.5 ဒါမှမဟုတ် 1.6 ကိုပြန်သွားချင်တယ်
Tavo VR အားပြန်ကြားပါ
Cezar တစ် ဦး က Arrieta L ကို ဟုသူကပြောသည်
၁.၀ မှ ၁.၆ သို့တိုက်ရိုက်မသွားနိူင်ပါ။ ပထမအဆင့်သို့ ၁.၅ သို့ပြောင်းရမည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမှုကိုဂူဂဲလ်ကုဒ်၏ developer စာမျက်နှာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Cezar A Arrieta L ကိုစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်မည်သို့ ၁.၅ ရပြီး ၁.၆ သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
william alvarez အားပြန်ကြားပါ
ANDROID SDK မှ ADB နှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံ command များ